Abstract: Iskaashi, Nooc, iyo Handoff Naqshadeynta Alaabtaada | Martech Zone
Waxaan la shaqeyneynaa shirkad heer qaran ah hadda si aan u horumarinno caadooyinka Suuq geynta Cloud moodellada mid kasta oo ka mid ah waaxyaha iyo qaybaha ganacsiga. Sababtoo ah daneeyayaasha, qandaraasleyda, iyo nashqadeeyayaasha dhammaantood waa fog yihiin, naqshadeeyaha wuxuu horumariyey jeesjeeskiisa wuxuuna ka shaqeeyey noocyo kooxda hoggaamintiisa ah - ka dibna wuxuu ku wareejiyey kooxdeena si ay uga jawaabaan koodh iyo fulin.
Naqshadeeyaha ayaa i baray Abstract. aan la taaban karin waa aalad wadashaqeyn online ah oo loogu talagalay Mac halkaasoo shirkaddaada, qandaraasleyda, iyo macaamiishaadu ay ku maamuli karaan, ku soo deyn karaan, kuna qaabeyn karaan dukumiintiyada hal meel.
Dulmarka guud ee Abstract
Si aad wax uga bedesho ama u sameyso feylasha qaabeynta, waxaad u baahan doontaa soo dejiso barnaamijka 'desktop macOS desktop'. Si loo wadaago oo loo helo jawaab celin, arjiga desktop-ka ayaa iswaafajinaya Abstract's abka webka.
Geedi socodka Shaqada Abstract
Abstract waxay u saamaxaysaa kooxdaada inay ka shaqeeyaan sayid, laan, iskaashi, siiyaan jawaab celin illaa iyo habka loo diyaariyo naqshadeynta alaabtaada la oggolaaday ee wax soo saar.
Soo dejinta - soo dejin Sketch iyo Adobe XD faylasha isla markiibana u abuurta meel dhexe shaqadaada naqshadeynta iyo dukumiintiyada taageeraya.
Iskaashiga - Ku billow sahaminta adoo abuuraya laan ka baxsan sayid si aad ugu qaabeysid meelaha shaqada ee is barbar socda. Laamahu waa meelo aamin ah oo adiga iyo nashqadeeyayaasha kale ay ka wada shaqeyn karaan isla faylasha isku mar, adigoon midba midka kale shaqadiisa ku dul qorin ama uusan saameyn ku yeelanayn sayidkiisa.
aamin - Diiwaangeli oo ku kaydi shaqadaada iyada oo lagu daro macnaha guud, dukumiintiyada dhismaha sida aad u socoto. Ay kujiraan qoraalo kusaabsan waxaad sameysay iyo sababta ay qeyb uga tahay badbaadinta shaqadaada Abstract.
Jawaab-celinta - Ka dalbo jawaab celin naqshadayaasha kale iyo daneeyayaasha, si toos ah shaqada. Faallooyinka iyo faallooyinka waxaa lagu duubay sabuuradda si tixraac fudud loogu sameeyo.
Version - Ka dib markii naqshadaha la oggolaado oo ay diyaar u yihiin inay hore u socdaan, tallaabada xigta ayaa ah in lagu milmo, ama lagu daro, isbeddeladaada oo loo noqdo sayid. Waad isbarbardhigi kartaa noocyada kala duwan ee looxyada kahor intaadan go'aansan isbeddelada aad rabto inaad kaydiso si aad ula qabsato iyo kuwa aadan sameyn. Iyo, haddii aad bedesho maskaxdaada ama aad khalad samayso, waxaad had iyo jeer dib ugu laaban kartaa noocii hore.
Production - Shaqada kala guurka ee naqshadeynta iyo horumarka si toos ah uga soo qaad Abstract. Horumariyayaashu waxay isbarbar dhigi karaan isbeddelada, waxay arki karaan cabbiraadaha, waxayna kala soo bixi karaan hantida - dhammaantood xiriiriyaha. Helitaanka daawaduhu waa waxa kaliya ee ay u baahan yihiin (waana bilaash).
Abstract waxay bixisaa hadiyado joogto ah iyo kuwo qarsoodi ah.
Bilow Tijaabadaada Abstract 14-maalmood Jadwalka Shaxda Abstract Demo
Tags: aan la taaban karinadobe xddesignjawaab celinta naqshadajees jeesnaqshada alaabtajawaab celinta naqshadeynta alaabtaSketchuiui jawaab celinnaqshadeynta adeegsadahaxakamaynta version